Malcolm Glazer Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Ihe Ndị Na-akpata Ndụmọdụ
AllNdị egwuregwu bọọlụ na BeljọmNdị egwuregwu bọọlụ CroatianNdị egwuregwu bọọlụ DanishNdị egwuregwu bọọlụ DutchNdị egwuregwu bọọlụ FranceNdị egwuregwu bọọlụ GermanNdị egwuregwu bọọlụ ItaliantaliNdị egwuregwu bọọlụ PortugueseNdị na-egwu egwuregwu bọọlụ SpanishNdị egwuregwu bọọlụ Switzerland
Thorgan Hazard Childhood Story Plus Ihe Ntinye Ucheld Biography Eziokwu
Home ELITE FOOTBALL Malcolm Glazer Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Ihe Ndị Na-akpata Ndụmọdụ
Emelitere ikpeazụ April 12, 2020
LB na-egosi Full Story of a Football Elite onye aha ya bụ "The Leprechaun". Ụmụ anyị Malcolm Glazer Akụkọ na akwụkwọ akụkọ na-adịghị mma Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge. Nyocha a na-agụnye ọdịnala ya, akụkọ ndụ tupu ama ama, ebili na akụkọ a ma ama, mmekọrịta na ndụ onwe onye.
Ee, onye ọ bụla maara banyere iwepụ Glazer na mgbasa ozi n'oge ndụ ya niile. Otú ọ dị, naanị mmadụ ole na ole na-atụle Malcolm Glazer's Biography nke na-akpali mmasị. Ugbu a n'atụbeghị ọganihu, ka anyị malite.
Ụmụaka Malcolm Glazer Akụkọ nke Na-adịghị Ekefu Ihe Ndị Bụ Eziokwu- Mmalite Ndụ na Ezinụlọ
Malite, Malcolm Glazer mụrụ na 15th nke August 1928 na Rochester na New York, USA.
Ọ bụ 5th nke ụmụ asaa a mụrụ nye nne ya bụ Hannah na nna ya Abraham. Ndị nne na nna Glazer bụ ndị Juu na-ata ahụhụ n'oge Oké Mgbukpọ ahụ. N'ihi ya, ha si Lithuania gaa USA na 1915 mgbe ohere ruru ya.
Mgbe ọ bịarutere n'ụsọ ahụ, Abraham (Glazer nna), onye mgbagha nke ndị agha Russia, biri na Rochester ebe o meghere otu nche nche na nchegharị nke a na-akpọ Gem Jewelry. Glazer bụ ọkpara kacha nso nna ya wee malite ịṅa ntị nke ọma na ọrụ ụlọ nche nna ya mgbe ọ bụ agadi 8.
Nwatakịrị ahụ nwere olileanya ma ọ bụ na ọ gaghị enwe olileanya ịmalite ọrụ ahụ ruo mgbe ọ na-enye ya ọrụ mgbe nna ya nwụrụ n'ihi ọrịa cancer na 1943. Otú a ka njem nke 15 ga-esi banye n'ime ahịa ụwa mgbe ọnọdụ na nne ya na-enye ya nsogbu.
"Ọ bụrụ na papa m anwụọ, ọ bụ ihe kacha njọ m mere na ndụ m, ma ọ dị mma n'otu ụzọ n'ihi na ọ mere m nwoke. Mama m na-agwa m mgbe niile, sị, 'Ị bụ di m, nwa m, ihe niile m nwere,' mama m nwere ụzọ na-eduhie m '
Chetara Glazer ihe mere ya ji azụ ahịa.
Izu abụọ mgbe oliv nna ya gasịrị, Glazer malitere ire ndị nche na akpa. Ọ chọpụtara na mgbalị ahụ siri ike n'ihi eziokwu ahụ bụ na ọ gara klas n'oge ehihie na College Sampson na Romulus, New York ma ree ụlọ nche n'abalị.
N'ihi ya, Glazer dere arụmọrụ agụmakwụkwọ na-adịghị mma ma chee na ọ "dị ala" nye ụmụ akwụkwọ nwere mmasị mmụta n'ụlọ akwụkwọ. Ọ nọrọ naanị na 6 izu na kọleji tupu ya etinye onwe ya na ahịa oge niile nke ọla na Watch ndozi.
Ụmụaka Malcolm Glazer Akụkọ nke Na-adịghị Ekefu Ihe Ndị Bụ Eziokwu- Ụzọ Iji Mara Aha
Oge gbanwere n'oge Glazer na-arụ ọrụ nlekota na 1936 mgbe enyi ya dọtara uche ya na e nwere franchises na isi ihe ndị dị na Sampson. N'inye ego na ohere, Glazer kwurịtara nkwekọrịta nke hụrụ ya ka o guzobe ụlọ ahịa na-edozi ụlọ nche maka ndị agha na isi.
O mere ego a na-enweta ego site na azụmahịa tupu e mechie ntọala ahụ na 1956. Mgbe mmechi nke isi ahụ, Glazer malitere ịbawanye ụba site na itinye ego na ezigbo ala, ihe na-esi na ụlọ ndị otu-na-ebi na Rochester na-ere ahịa n'ezie na America.
Ya mere, nnukwu ihe ndị ahụ bụ Glazer weghaara ihe ndị ọ ketara eketa ma hụ ụlọ ọrụ mmezi, na-etinyekwu ego na ụlọ ọrụ dị ka ụlọ akụ, nlekọta ahụike, na mgbasa ozi n'etiti 1956 na 1976. O hiwekwara otu ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụlọ First Allied Corporation, iji jikwaa achụmnta ego ya.
Ụmụaka Malcolm Glazer Akụkọ nke Na-adịghị Ekefu Ihe Ndị Bụ Eziokwu- Bilie Iji Mara Aha
N'elu ọnụ ahịa azụmahịa ya, Glazer adabaghị n'ọchịchọ ya ịzụta ụlọ ọrụ na-achịkwa gọọmenti, Conrail maka 7.6 ijeri 1984. Nte ededi, enye ama enyene ndidụk ndusụk ido ukpepn̄kpọ ke protein, internet, ebubo ye nsụhọ ye eke gas.
Ọ ghọrọ onye a ma ama karịa ụwa azụmahịa mgbe ọ zụtara American Club Club Tampa Bay Buccaneers na 1995. Dị ka onye ọchụnta ego na-atụ egwu, ọ hụrụ ka ọgba aghara nke òtù ndị òtù kasị njọ na NFL gafere na otu nke dekọrọ ọtụtụ ndị na-akwụ ụgwọ na ya.
N'ebe ndị America na-agba ọsọ, Glazer ghọrọ onye a ma ama na ụwa bọl mgbe ọ na-ejide ụlọ nke England Premier League, Manchester United maka £ 790m site n'inweta nwayọọ na-azụ ndị nwe ụlọ n'etiti 2003-2005.
Ọganihu a na-eme ọtụtụ afọ site n'ịkatọ ndị Fans nke ndị England na-akatọ Glazer na ụmụ ya na-ejikọta ụmụ ha maka ịbanye n'ụgbọ ahụ ụgwọ, Otú ọ dị, ụlọ ọrụ ahụ enwewo ọganihu n'ụzọ zuru ezu na nzube ya ruo oge.
Ụmụaka Malcolm Glazer Akụkọ nke Na-adịghị Ekefu Ihe Ndị Bụ Eziokwu- Ndụ mmekọrịta
N'azụ onye ọchụnta ego ọ bụla nwere ọganihu bụ nwanyị. Ọdịiche a dị elu maka Glazer bụ onye dekọtara ihe ịga nke ọma n'ịzụ ahịa mgbe ya na nwunye ya bụ Linda.
Glazer zutere Linda n'oge ọ na-aga ngwa ngwa na ụlọ ala, onye duo ahụ maka afọ ole na ole tupu ya alụọ na 1961. Enwere mmekọrịta ha na ụmụ nwoke 5 na nwa agbọghọ 1. Anyị na-ewetara gị nkọwa gbasara Malcolm Glazer Children.
Avram Avi Glazer bụ nke mbụ n'ime ụmụ Glazer. Onye gụsịrị akwụkwọ bụ onye isi oche nke Manchester United n'etiti ọrụ ndị ọzọ.
Ọzọ bụ Bryan Glazer nke nwekwara ụlọ ọrụ Manchester United, First Allied Corporation na Tampa Bay Buccaneers nke NFL.
Joel Glazer bụ akụkụ nke ezinụlọ Glazer nke na-elekọta First Allied Corporation na Zapata Corporation. Joel kwukwara na Tampa Bay Buccaneers nke NFL, na England nke Manchester United Football Club. Ọ dị mma ịmara na Joel bụ onye na-akwado Manchester United nke a kwenyere na ya ga-abụ ihe na-eme ka nna ya nwee mmasị inwere onwe ya.
Tụkwasị na ndepụta bụ Kevin Glazer, onye isi oche nke mbụ Allied Corporation. Onye gụsịrị akwụkwọ na Ithaca College nwekwara osisi na Manchester United wee soro Red Football kpachibido.
Nanị nwa nwanyị a mụrụ maka ezinụlọ bụ Darcie Glazer. Onye gụsịrị akwụkwọ na Psychology sitere na University of America bụ co-president nke Glazer Family Foundation n'etiti ọrụ ndị ọzọ.
Nke ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ bụ Edward Glazer, nke ọdụdụ nwa. Edward dị ka nwanne ya nwoke bụ Kevin gụsịrị akwụkwọ n'Ụlọ Akwụkwọ Ithaca. N'otu aka ahụ, ya na First Allied Securities, Manchester United, na Red Football Limited.
Ụmụaka Malcolm Glazer Akụkọ nke Na-adịghị Ekefu Ihe Ndị Bụ Eziokwu- Philanthropy
Glazer mere ihe nile o tinyeworo aka na ya, gụnyere obodo ya, ebe o tinyere ego n'ọtụtụ ọrụ ndị na-enye obi ụtọ. Ọ malitere Glazer Family Foundation na 1999, otu nzukọ dị n'etiti ihe ndị ọzọ, raara onwe ya nye iji nyere ndị ọrụ ebere aka na ihe mmụta na Tampa Bay. Ntọala ahụ dị ka ọ dị adị, nyere ọtụtụ nde mmadụ na mmemme, tiketi, onyinye na onyinye dị iche iche.
Tụkwasị na nke ahụ, Glazer na-ahụ maka arụmọrụ nke Mmemme Nkiri nke Foundation, nke e kere na 2006 iji chọpụta nsogbu ọhụụ na ụlọ akwụkwọ-ụmụaka mgbe ha dị obere. Ụzọ ahụ na-aga ụlọ akwụkwọ ma na-enyocha ụmụ anya ọtụtụ puku ụmụaka
Ụmụaka Malcolm Glazer Akụkọ nke Na-adịghị Ekefu Ihe Ndị Bụ Eziokwu- Obi Ụtọ Ụmụnne
Ọ bụ ezie na a sịrị na ọrụ ebere na-amalite n'ụlọ, Glazer mere ka ọ bụrụ ihe na-ekwenyeghi na okwu ndị a na-ewu ewu dị ka ọhụụ na esemokwu ya na ụmụ nwanyị 5 ya ruo n'ókè nke ịchọrọ akụkụ buru ibu nke $ 1 nde ụlọ nke mama ya chọrọ ụmụnne ya tupu ya anwụọ. Glazer na-akọ akụkọ banyere ogologo oge ndụ ha n'ụzọ dị otú a:
"Mụ na ụmụnne m nwanyị agatụghị ebe ọ bụla. Ha adaghị m. "Mama m na-asị, 'Were ya gaa na fim,' ha ga-asị mba. Nne m ga - asị, 'Ntak-a? Ị ga-anọdụ ala n'akụkụ onye ọbịbịa. ' Ha kwuru, sị, 'Anyị anaghị elekọta, anyị anaghị ewere ya.' "
O kwukwara na ụmụnne ya ndị nwanyị kpọrọ ya asị n'ihi mmekọrịta chiri anya ya na mama ha nwere tupu ya anwụọ.
"Ana m ewute mama m na enwere mmekọrịta dịka anyị mere. Adịghị m mgbaghara, mana anyị mere. N'ọdịnihu m, agaghị m eso nne m nso, ụmụnne m ndị nwanyị ga-enwe obi ụtọ. Ọ dị m nwute na m mere nne m ihe bara ọgaranya. "
Uwe a iji laghachi na ụmụnne ya nwanyị site n'inwe òkè kachasị elu nke $ 1 nde ụlọ dị mgbagwoju anya. Ka o sina dị, Glazer kwuru na ọ ga-agwa ụmụnne ya nwanyị na ọ na-ewe iwe megide ha ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndụ.
Ụmụaka Malcolm Glazer Akụkọ nke Na-adịghị Ekefu Ihe Ndị Bụ Eziokwu- Ebumnuche kpatara aha njirimara
Glazer na-akpọ Leprechaun n'ihi ọdịdị ya na ejiji na-ele anya ginger.
Ụmụaka Malcolm Glazer Akụkọ nke Na-adịghị Ekefu Ihe Ndị Bụ Eziokwu- ọnwụ
Glazer nwụrụ 85 agadi na May 28, 2014. Ruo ọnwụ ya Glazer ọnwụ, ọ dara ogbenye n'ihi ọrịa strok abụọ na April 2016. Ọrịa strok ahụ metụrụ ya aka nakwa na ọ na-agagharị n'aka nri ya na Aka nri.
Ụmụaka Malcolm Glazer Akụkọ nke Na-adịghị Ekefu Ihe Ndị Bụ Eziokwu- Eziokwu nke Onye
Ruo mgbe ọ nwụrụ na 2014, Malcolm Glazer bụ onye ọchụnta ego a na-ejide n'aka bụ onye gosipụtara na enweghi obi abụọ ọ bụla na ọganihu n'achụmnta ego na-arụ ọrụ siri ike ma kpebisie ike n'agbanyeghị agbanyeghị ọnọdụ. Glazer n'onwe ya anaghị agọnahụ àgwà ndị ahụ mere ka ọ nwee ihe ịga nke ọma n'ịzụ ahịa dị ka ọ na-ekwu na:
"Gosi m onye ọchụnta ego na-aga nke ọma, m ga-egosikwa gị onye na-arụ ọrụ 80 awa n'izu."
Maka Glazer, ndụ dị mma karịa ka ọ mara n'ụzọ ọ malitere ịmalite ịzụ ahịa na 8 afọ ma na-elekọta otu ijeri dollar, ọbụna mgbe ọ na-arịa ọrịa strok ruo ọnwụ ya. Ka o sina dị, o kweere na ụmụ mmadụ ma bie ndụ n'okwu nile nke Ụkpụrụ Ọma ahụ
"M na-agbalịkarị ịgwọ ndị mmadụ n'ụzọ ziri ezi. Ị ghaghị ịdị mma nye ndị mmadụ. Ọ bụ ezi uche. Ọ bụrụ na i meghị ya, ị gaghị enweta ezigbo nchọta. "
Moreso, enweghi mmetụta ọmịiko dị ka ụzọ o si hụ Tony Dungy, onye bụbu onye nchịkwa nke Tampa Bay Buccaneers na ọ gbapụrụ na 2001. Nwa Dungy gburu onwe ya na 2005 na Glazer na-aga na olili ozu na-ezukọ ọnụ na ezinụlọ nke onye ahụ nwụrụ anwụ n'ụzọ mmetụta uche. Dị ka Jeffery Singletary si kwuo, onye na-eduzi ọrụ ahụ:
"Glazer na-akwa ákwá n'ihu Dungy ruo n'ókè nke na Dungy nwetara nkasi obi Glazer, karịa nke ọzọ".
E nweghị ụzọ dị mma iji mee ka otu onye otu narị nde mmadụ na-eme njem na-enweghị obi ụtọ karịa ịhazi olili ozu nke onwe ya, ya bụ na a chọrọ ka ezinụlọ ya nye ya. N'otu aka ahụ, e nyere ntụziaka ka e nye okooko osisi na onyinye n'onye ụlọ ọgwụ dị na Tampa ebe o bi.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ anyị bụ Malcolm Glazer Child akụkọ nke bụ eziokwu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike ka anyị mee ihe ziri ezi. Ọ bụrụ na ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.
Sheikh Mansour Childhood Akụkọ gbakwunyere Ezigbo Ihe Ndị E Dere na Ya
Lorenzo Sanz Childhoood Story Plus Untold Biography Eziokwu
Aleksander Ceferin Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Roman Abramovich Childhood Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Michel Platini Ụmụaka Akụkọ nke Gbasara Eziokwu Ndị Na-adịghị Agbanwe
Gianni Infantino Child Story Plus Ihe na-emeghi ihe omuma
Bọchị agbanweela: June 28, 2020
Bọchị agbanweela: June 15, 2020
Bọchị agbanweela: June 16, 2020